ကိုယ်တွေ့ ဇတ်လမ်း ကောက်နုတ်ချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကိုယ်တွေ့ ဇတ်လမ်း ကောက်နုတ်ချက်
ကိုယ်တွေ့ ဇတ်လမ်း ကောက်နုတ်ချက်
Posted by ဆူး on Jan 21, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 15 comments
မှော်ဘီ ဘက်က ဘုန်းကြီး ကျောင်းတခုကို ၀ါတွင်း ဥပုတ်နေ့တိုင်း ချိုင့်ဆွဲပြီး ဆွမ်းသွားကပ်လေ့ ရှိတယ်။ ကားအတွက်ကတော့ အဆင်ပြေသလိုပေါ့။ ငှားနေကျ အငှားကား ဦးလေးကြီးနဲ့ကလည်း ရင်းနှီးနေတော့ စိတ်ချ လက်ချ သွားလို့ လည်း ရတယ် ကားဆရာကြီးက သဘောကလည်းကောင်းတယ် ဘာသာရေးလည်း ကိုင်းရှိုင်းသူ ဆိုတော့ သွားရင်းလာရင်း လေပေးတော့ ဖြောင့်တယ်။ သူကားကို ငှားစီးရင်းနဲ့ သူ့တူမ လိုတောင် ဖြစ်နေပြီ။
သဘောကောင်း မနောကောင်း ကားဆရာ ဦးလေးကြီးက ဘုန်းကြီးကျောင်း ရောက်ရင် မီးဖိုဆောင်ထဲ ၀င်ပြီးတော့ လှီးစရာ ဖြတ်စရာတွေ ရှိရင် ၀င်ကူပေးတယ်။ အိမ်သာတွေ ညစ်ပတ်နေရင်က အစ ဆေးကြောတယ် သန့်ရှင်းအောင် လုပ်ပေးတယ်။ ဆွမ်းကပ်တော့လည်း သူလည်း ၀င်ကပ်တာပေါ့။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဝေယျာ ၀စ္စတွေ လုပ်နေတာ အသားကျနေတော့ သူအတွက်လည်း ဘာမှ အပန်းမကြီးသလို လုပ်နေတာဘဲ။ တနေ့ ကျောင်းမှာ အလှူတခု ရှိတယ်။ ဧည့်သည်တွေ လာမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အိုးကြီး ခွက်ကြီး ချက်ပြုတ်နေတာနဲ့ ကြုံတယ်။ အမြဲနေ ကပ္ပိယ သိပ်မရှိတာက တကြောင်း ၀င်ကူနေကြ ဖြစ်တာကတကြောင်းပေါ့လေ.. ဟင်းအိုးတည်ထားတယ်။ မီးအပူရှိန်နဲ့ ဆူပွက်နေပါတယ်။ အရမ်းကို ဆူနေတာ ဖြစ်တဲ့ အပြင် ဒယ်အိုးမှာ တပ်ထားတဲ့ ယောင်းမ လက်ကိုင်က သံတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ဖိုင်ဘာ အပူခံနိုင်အောင် တပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တယောက် တမျိုးစီ မအားကြတဲ့ အထဲက ဦးလေးရေ ဟင်းအိုး အရမ်းဆူနေပြီ မွှေလိုက်ပါအုန်း ဆိုတာနဲ့ ထပြီး မွှေလိုက်ပါတယ်။ ကိုင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ပူသလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုင်စရာ လက်နှီးစုပ်မရှိတာနဲ့ အဆင်ပြေသလို ပုဆိုးကို လက်လှမ်းသုတ်လိုက်တယ်။
အမှတ်တမဲ့ နေရင်းနဲ့ ညနေ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ပုဆိုးကို လက်နဲ့ စမ်းကြည့်တော့ ပုဆိုး မီးပူကပ်မိသလို အကွင်းလိုက် ပေါက်နေတာမျိုး ဖြစ်နေပြီးတော့ ယောင်းမ လက်ကိုင် ဖိုင်ဘာ ကော် တွေ ပေ နေတာ သတိထားမိတယ်။ သူ့လက်ကို ကြည့်တော့ တစုံတရာ အပူလောင်တာ မရှိဘူး။ သူကိုယ်တိုင်လည်း တော်တော် ယုံကြည်သွားတယ်။ ကုသိုလ်စိတ်က အကျိုးပေးတာနဲ့ အပူလောင်မဲ့ ဟာတောင် ပူတယ်လို့ အပြင်းအထန် မခံစားလိုက်ရဘူး ဆိုပြီး ၀မ်းသာ အားရ ပြောသွားပါတယ်။
တခု အတွေးထဲ ပေါ်လာတာကတော့ သူ စိတ်ထဲမှာ အလုပ်ကို ဇောစိတ်ကျနေပြီး ပူလို့ ပူမှန်း မသိဖြစ်ပြီး အပူတွေ ချက်ချင်း ပုဆိုးကို သုတ်လိုက်တဲ့ အတွက် လက်မပူတာများလား။ ဒါပေမဲ့ အပူဆိုတာ ထိတာနဲ့ ချက်ချင်း အနာ ဖြစ်နေနိုင်တာ သူပြောသလို ဖိုင်ဘာ ဆိုတာ အပူခံနိုင်တဲ့ သဘော ရှိတာ မီးအရှိန်ဟပ်တာနဲ့ အပူပြင်းပြင်း ပျော့သွားတဲ့ အချိန် ကိုင်မိတာ လက်မှာ ဘာမှ မဖြစ်တာတော့ အံသြစရာပေါ့လေ။
သရဏဂုံအစွမ်းအံ.မခန်းဆိုတာပေါ့ မဆူးရဲ. ….
ဘုရားခေတ်ကလဲ … သံဃာတော်တွေအတွက် ဆွမ်းချက်နေတဲ့ ဥတ္တရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကို သိရိမာဆိုတဲ့ သူ.ယောက်ျားအတွက်ငှားပေးထားတဲ့ ပြည့်တန်ဆာမက မနာလိုလို. ကျွတ်ကျွတ်ဆူနေတဲ့ ထောပတ်ရည်နဲ. လောင်းလိုက်တာ ဂုံတော်တွေရွတ်ဖတ်ပီး ကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ.ပြည့်နေတော့ ကျွတ်ကျွတ်ဆူနေတဲ့ ထောပတ်ရည်တောင် ရေးအေးလို.ဖြစ်သွားတရ်ဆိုပဲ ….
ဟယ်…..အံ့သြစရာကြီးတော့်…။ ဟီးဟီး။ သွားပြီ သွားကုန်ပြီ။
ကွီးလေး ဆိုလိုရင်း သဘောပေါက်တယ်။ ဂမ်ဘာရီ အော်ချင်တဲ့ လူကလည်း အော်တာဘဲ.. ကုသိုလ်ဆိုတာ ချက်ချင်း အကျိုးပေးတာကို သာဓက တခုအနေနဲ့ ရေးပြီး တင်ပေးတာပါ။
လူ့ လောက။ သူ့ ဟာနဲ့ သူ ဟုတ်နေတာပဲ။ ဂစ်တာကြိုးလိုပဲ အလျော့အတင်းလုပ်လို့ ရသားပဲဗျ။ မတရားမှုကို လုပ်နေတာတွေ သူတို့ ဘာကြောင့် အကျိုးမပေးကြသလဲ။ ဒါကိုကျတော့ နောင်ဘ၀ ဘယ်ဘုံရောက်မှာ ဘာဖြစ်မှာ ဆိုပြီး ဖြေသိမ့်ကြပြန်ရော။ အတိဒုတ်ခတွေရောက်နေကျတော့ မီးမြင်မီးကိုးကွယ် ရေမြင်ရေကိုးကွယ်။……. ဘာပုံတော်ကြီးပေါ်လာတာ။ ကောင်းကင်ပေါ်မှာ ဘယ်လိုပုံတော်မြင်ရတာ ဘာညာဘာညာ။ ပေါ်လာလိုက်တဲ့ တန်ခိုးရှင်တွေလဲ ဒုနဲ့ ဒေး။ သူများနိုင်ငံမှာ သဘာဝဘေးဒဏ်ကြုံရရင် ဒို့ နိုင်ငံက သာသနာရောင်ဝါလွမ်းလို့ ။ ဒို့ နိုင်ငံက သဘာဝဘေးဒဏ်ကြုံရရင် မင်းဆိုးမင်းညစ်ကြောင့်မို့ လို့ ။ ဒို့ မြို့ နယ်က ဒုတ်ခရောက်ရင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်သူ မတရားလို့ ။ ဒို့ အိမ်က ဒုတ်ခရောက်ရင် ဘ၀အကျိုးပေး ရှေးကုလိုလ်နည်းလို့ ။ ဒို့ လက်ညိုး ဘယ်ကိုထိုး….ထိုးထိုးထိုး……….။။။ ဆရာစံက အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့ ခလှည့်များနဲ့သူ့ လူတွေကို စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုရအောင် စိတ်ပညာကိုသုံးခဲ့။ သူတို့ ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိတာကို ဆရာစံက သိနေခဲ့။ ခေတ်တွေကပြောင်း လူတွေလည်းပြောင်း။ ဦးဏှောက်တွေက မပြောင်း….။
အိုဘဲ့…အံ့သြထူးဆန်းစရာ တန်ခိုးရှင်များ ခင်ဗျား …။ သာသနာရောင်ဝါလွမ်းတဲ့ ဒို့ တိုင်းပြည်ကို ဒီအတိုင်းကြည့်မနေကြပါနဲ့ ။ ဘုရားသာသနာတော်ထက် ပိုပြီး ဗေဒင် အဆောင် ယတြာတွေက လွမ်းမိုးနေတာကို ကြည့်မနေကြပါနဲ့ ။ ကံ..ကံ၏ အကျိုးကို မေလျော့ပြီး သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်မဆန်းတာတွေကို အားတက်သရောဖူးမျှော်(သွေးထဲမှာ ဘာကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုလား) နေကြသော အမိုက်မှောင် တိမ်ဖုံးနေကြသူတွေကိုလဲ အသူရကာယ် ဘုံကိုရောက်တဲ့ အထိ စောင့်ကြည့် မနေကြပါနဲ့ ။ ဗေဒင် ယတြာကို နေရာတိုင်းမှာ အဆောင်လက်နက်အဖြစ် ယုံကြည်ကိုင်ဆောင်နေတဲ့ လက်တစ်ဆုပ်ကိုလဲ ဒီအတိုင်းလွှတ်ပေးမထားပါနဲ့ ။နဲ့ နဲ့ နဲ့ နဲ့ …….။။။
ခက်တာပဲ။ ဘယ်လို အမှန်ကို ရေးရေး လက်မခံကြပဲ။ တကယ့်ကို သွားပြီ သွားကုန်ကြပြီပဲ…….။
ယုံကြည်မှုရှိနေရင် … ဘာ ဘာသာဖြစ်ဖြစ်..အဲဒီလိုအံ့ဖွယ်သုတတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်..။
ဟိန္ဒူတွေဆို .. မီးကျီးခဲတွေ ခြေဗလာနဲ့တက်နင်းတာတောင် ဘာမှမဖြစ်တာ မျက်မြင်ပါ..။
ပြောရရင်..အဲဒီလို ထူးထူးဆန်းဆန်း ထပ်တွေ့ရတာ..အာဖရိကက လူမျိုးနွယ်စုတွေမှာေ၇ာပါပဲ..။ အဲဒီလိုနဲ့.. နတ်ဆ၇ာအကုန်ထိုင်ကတော့နေကြတာပေါ့..။
အဲဒါနဲ့.. ငါဟဲ့..မယ်ရစ်ကယ်ရှင်ဆိုပြီး ..ဘုန်းကြီးကျောင်းတချိန်လုံးသွားလုပ်ပေးနေပြီး .. အိမ်ကမိသားစုကိုတော့ ပစ်မထားဖို့ပါပဲ..။
မမဆူးမှာGtalk Account ရှိလားရှိရင်ပြောပြပေးပါနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျုပ်တို.ကတော့ ဗေဒင်လဲမယုံ၊ ယတြာလဲမလုပ် ….
လုပ်နေတဲ့သူကတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ လူတိုင်းသိပါ့ ….
အမြင့်မှာထိုင်နေတော့ လူမြင်လွယ်တာပေ့ါ ….
ပြောပြန်တော့လဲ ပြောတဲ့သူအမှား ….
မပြောစေချင်ရင် မမြင်အောင်လို. အောက်ဆင်းထိုင်ပေ့ါ …
ပြောသာပြောရတရ် … အဆိုးအညစ်နဲ.တွေ.တာလဲ ကိုယ့်အကျိုးပေး စင်းလုံးချော မဟုတ်တာလဲပါတရ်ဗျ ….
ဦးဏှောက်တွေက ပြောင်းနေပေမဲ့ …. ခေတ်ပြောင်းလို.မရတာက … ဒုက္ခတစ်ခု…..
ကံဆိုးတာက သူ.ဆီကရုန်းမထွက်နိင်သေးတာ ….
ကံကောင်းတာက သူ.လိုမျိုးစိတ်ယုတ်မာတွေ ကိုယ့်ဆီမှာမကူးစက်တာ ….
မဆူးရယ် … အမပို.စ်နဲ. မဆိုင်တာတွေပြောမိလို. …. sorry ပါဗျာ ….
ဆွမ်းဆန်ကြားမှာ ကြက်ချီးရောတော့လဲ သန့်သွားအောင်လို. ကြက်ချီးဝင်ဖယ်ရသေးသဗျ။
အင်း…၀ါသနာက မသေးပါလား ငထွားရယ်။
၀ါသနာကို မတားနဲ့ တော့ရှင် ဆိုတတာလိုပဲလေ ဟီးးး
အမှန်ပါဘဲ…ကောင်းတာလုပ်တယ်…ရင်မှာငြိမ်းအေးနေတယ်လေ… ဒါဆိုကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီးပေါ့…ဓမ္မဖြစ်နေပြီးပေါ့… ကုသိုလ်ကိုအာရုံကရောက်နေတော့…ဒီအပူလောက်ကတော့… ဓမ္မကငြိမ်းသတ်ပြီးသားပေါ့… အဓမ္မလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားကြည့်ပေတော့… ဘယ်လောက်ပူလောင်မလည်းဆိုတာ… ဓမ္မရဲ့သဘောတရားတွေပါ…
သတင်းတစ်ပုဒ်….. သို့တည်းမဟုတ်… အနုပညာတစ်ခု ဖြစ်တန်ကောင်း၏…
ဖန်တီးမှု ရှိမယ်.. ဦးတည်ချက်..(စာရေးသူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်..အာဘော်)ရှိမယ်.. ပြီးတော့.. တင်ပြပုံ ရှိမယ်..
Creation,, Aspiration,, Presentation
အဲဒီလိုပေါ့.. CAP တဲ့..
စာရေးသူကတော့ အတွေးစတစ်ခုကို ဖန်တီးကြည့်မယ်..
ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ထည့်မယ်..
နောက်…အဲဒါကို သူ တင်ပြမယ်.. တတ်စွမ်းသလောက်..
ဆူးရဲ့ “ကိုယ်တွေ့ ဇတ်လမ်း ကောက်နုတ်ချက်” မှာလည်း…
တင်ပြပုံက………….ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကူရင်းနဲ့… သူ့ရဲ့ကုသိုလ်တရား..(ကုသိုလ်စိတ်…ပီတိ) က
မည်သို့မည်ပုံ အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာထက်…. (အပူကို အပူမှန်းမသိလိုက်မိဘူး)
“ကုသိုလ်စိတ်က အကျိုးပေးတာနဲ့ အပူလောင်မဲ့ ဟာတောင် ပူတယ်လို့ အပြင်းအထန် မခံစားလိုက်ရဘူး” ဆိုပြီးတင်ပြထားပါတယ်..
ကျွန်တော်တော့ အဲဒီလို ခံစားမိပါတယ်..
ဂမ္ဘီရ လည်း မဟုတ်ဘူး.. မက်ရစ်ကယ်လည်း မဟုတ်ဘူး.. ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကူညီဖို့ပြောတာ ကူညီလို့ ဖြစ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး..
သဒ္ဓါကြည်ညိုစိတ် အပြည့်အ၀ရှိနေချိန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့.. ကုသိုလ်စိတ်..( စိတ် ) ရဲ့ ဆန်းကျယ်ပုံ..(အကျိုးပေးဆန်းကျယ်ပုံ) .. စိတ်၏ စွမ်းအားကြီးမားပုံကို တင်ပြတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်..
“ကုသိုလ်စိတ်က အကျိုးပေးတာနဲ့ အပူလောင်မဲ့ ဟာတောင် ပူတယ်လို့ အပြင်းအထန် မခံစားလိုက်ရဘူး”
အဲဒီလို မျိုး မတွေးကြည့်ပဲ နဲ့ ပုဆိုးကလေး နဲ့ ကိုင်လိုက်လို့ ငါလက် အပူမထိပါလားလို ပြောင်းတွေကြည်ပါလား (တခု ခုဆို ကုသိုလ်ကြောင့် လို့ ပြေးပြေးမြင် ကျတာတော့ မဟုတ်သေးဘူး)